Nhazi ihe niile, IEC61850 SV & GOOSE, 6I + 4V ọwa analog rụpụtara, Inbuilt GPS na IRIG-B na ọrụ ndị ọzọ.
Ebumnuche niile na-otu, ịdị arọ <17.5kg;
Ike dị elu & izi ezi na 6x35A & 4x310V ntinye analog;
Mezu IEC61850 plele Uru & ỌR;;
Everbawanye ọba akwụkwọ ndebiri nke na-amụbawanye oge niile;
Nhọrọ tupu ọrụ dị ka ike mita na transducer mmezi wdg
Comprehensive ule ngwá ịzụlite dabere na ọgụgụ isi substation ule, tumadi ọrụ bụ nchebe ọsọ agba anọ ule, nlele uru analysis, SCD faịlụ analysis / tụnyere na MMS ọrụ. Adabara nchọpụta na ule nke IED akụrụngwa dị ka nwere ọgụgụ isi na-echebe ọsọ agba anọ, mmesho na akara ngwaọrụ, jikota unit na ọgụgụ isi ọnụ. A nwekwara ike iji ya na akara ngosi nke akara njikwa akara.
Ibu oriọna: <2.75kg
Ọrụ ihuenyo mmetụ zuru ezu
Nhazi ihe niile, IEC61850 SV & GOOSE, 6I + 7V ụzọ analog rụpụtara, Inbuilt GPS na IRIG-B, na ọrụ ndị ọzọ na-aga n'ihu.
Plygbaso uru atụ na GOOSE maka IEC61850 IEDs, Merger Unit etc.
High-nkenke analọg ampilifaya, 6 × 32A na 7 × 130V AC isi.
10.4 ”ihuenyo mmetụ na keyboard na-arụ ọrụ.
KS823 Usoro ato AC / DC / Harmonic Standard Source na Calibrator (klas 0.05)
KS813 Usoro atọ AC / DC / Harmonic Standard Source (klas 0.05)
KS803 Usoro ato AC / Harmonic Standard Source (klas 0.05)
Anya Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Nyocha nke Digital, Relay Test, Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Esi esi agba anọ Tester, Ọgụgụ ọsọ agba anọ Tester, Ngwa niile